Ihe izizi ikuku ndu ikuku na HD | Netwọk Mgbasa Ozi
Mmetọ ikuku anaghị adị mfe nghọta mgbe ụfọdụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị nọ n'ime obodo e metọrọ emetọ. Naanị site n’ebe dị anya na site n’enyemaka nke anyanwụ ka a pụrụ ịhụ ihe oyiyi ndị na-enye nsogbu n’ezie banyere mmetọ.
Ndị European Space Agency (ESA) gosipụtara ihe osise satịlaịtị mbụ na mmetọ ikuku. Ọ bụ oge mbụ enwere ike ịhụ mmetọ site na mbara igwe ekele na Sentinel-5P satịlaịtị. Chọrọ ịmatakwu banyere mmezu nke a?
Mbibi ikuku site na mbara igwe
E zigara Sentinel-5P satịlaịtị n'ọnwa Ọktoba gara aga. Qualitydị mma ya na mkpebi nke ihe oyiyi na data na-anọchi anya akụkụ ọhụrụ. Ihe ziri ezi na nkọwa nke esi enweta data a dị ka ọ bụrụ na anyị nwere ike ịhụ mmetọ ikuku na HD zuru ezu, ma ọ bụrụ na anyị jiri ha tụnyere okenye okenye mkpebi nha.
Josef Aschbacher bụ onye ntụzi nke Mmemme Ule Observation nke ESA bụ onye na-ahụ maka igbapụ satịlaịtị a nwere ike ijide ma gosipụta mmetọ ikuku na mma HD.
Satelite na-etinye Tropomi, ihe kachasị dị elu na ntanetị. N'ihi nke a, ogo nke ihe oyiyi enwetara dị oke elu. Site ugbu a gaa n’ihu, satịlaịtị a ga na-ahụ maka ịtụ gas ndị a hụrụ na ikuku, otu n’ime ha bụ nitrogen dioxide, ozone, carbon monoxide, methane, formaldehyde, sọlfọ dioxide na aerosols.
Tropomi pixel size bụ 7 × 3,5 km2. Nke a na-enye ohere maka mkpuchi ụwa kwa ụbọchị ma na-enye ihe dịka 640GB nke ozi na data kwa ụbọchị.
N'ihi àgwà a nke ozi ọ ga-ekwe omume ịme nha dịka ọ dịtụbeghị. Josef kwuru, "Ugbu a, anyị abanyela n'ọgbọ ọhụrụ nke etu ikuku ikuku."
"Anyị nwere gburugburu 4.000 wavelengths kwa ụdịdị dị iche iche na anyị tụọ banyere 450 spectra kwa abụọ na nde mmadụ iri abụọ ndị a kwuru kwa ụbọchị“Pepijn Veefkind, kwuru, site na Royal Netherlands Meteorological Institute, mgbe ọ na-egosi ọtụtụ onyonyo mepụtara site na data nke Sentinel-5P zipụrụ.
Ebumnuche nke mmemme ọhụrụ a bụ ịlele ụwa iji nye ozi banyere ikuku dị n'oge. Nke a ga - enyere aka nke ukwuu mgbe ị na-eme mkpebi n'ọdịnihu banyere mgbanwe ihu igwe. A nwekwara ike iji ya soro ntụ mgbawa na-emetụta ụgbọ elu na ọrụ ịdọ aka na ntị n'ogo dị elu nke radieshon.
Nsonaazụ ihe sitere na satịlaịtị a agabigala atụmanya, ya mere enwere ike ịsị na ọ bụ ihe na-agbanwe agbanwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ihe oyiyi izizi nke mmetọ ikuku na HD
Ala ọma jijiji 8,2 na-eme Alaska ma mee ka ịdọ aka ná ntị tsunami